ဆက်ဆံရေးအတွက်အချစ်ဇာတ်လမ်း | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
ဆက်ဆံရေးပြီးသားနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအထူးသဖြင့်အခါ, ကပင်အချို့သောဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဆက်ဆံရေးအတွက်အချစ်ဇာတ်လမ်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ ဒါကပုံမှန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့စုံတွဲများကအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်နိုငျသညျ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တန်းကအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအရေးကြီးပါသည်။ ဤစီမံကိန်းအောင်မြင်ကြောင်းသေချာစေရန်, ကနှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်သုံးပါနှင့်ပြန် foreground သို့အချစ်ဇာတ်လမ်းထားရန်ပြလတံ့သောအလွန်အရေးကြီးပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆက်ဆံရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအစဉ်အမြဲလူနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့သင်တန်း၏, ထိုအချစ်ဇာတ်လမ်းနေ့စဉ်အသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်မည်သို့မေးခွန်းပေါ်ပေါက်။ တစ်ဦးရင်ခုန်စရာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်အောင်မြင်နိုင်သည့်အတွက်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
စုံတွဲတစ်တွဲတစ်ဦးရင်ခုန်စရာလေထုထဲကနေအကြိုးပွုနိုငျသောကွောငျ့တစ်ဦးကအချို့သောအချစ်ဇာတ်လမ်းအမြဲ, ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သင့်သည်။ ကအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုထပ်ကြားဆက်ဆံရေးပြန်လည်ရောက်ရှိနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာမိတ်ဖက်အတူတကွဖြစ်စေသောရဖို့သေချာလျှင်ဒီအကြောင်းပြချက်ကသဘာဝကျပါတယ်။ အဆိုပါမိတ်ဖက်များအတွက်တစ်ဦးကညစာသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့လက်ဆောင်တွေဟာအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။
ဒါ့အပြင်ဘုံ pastime သည့်မိတ်ဖက်ဖို့နီးကပ်အပြုသဘောရိပ်မိကြောင်းသေချာစေရန်နိုင်ပါတယ်။ တခါတရံကပျော်ရွှင်နေ့စဉ်အသက်အဘို့အအချစ်ဇာတ်လမ်း၏အပြည့်အဝမယ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးအဖြစ်မကြာခဏအချိန်ကြာမြင့်စွာရင်ခုန်စရာအမူအရာလုပ်ရန်ခက်ခဲပေမယ့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကောင်းစွာရကျိုးနပ်ဖြစ်နိုငျသညျ, နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုကတကယ်တော့အချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာလေထုနိုင်သလော
သင့်လျော်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုယူနေတယ်ဆိုရင်, ကကောင်းစွာဆက်ဆံရေးအတွက်ရင်ခုန်စရာစိတ်ဓါတ်များအချိန်နှင့်အတူချွတ်ကျီကြောင်းဖြစ်ပျက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါမိတ်ဖက်စိတ်ဝင်စားအများဆုံးဆက်ဆံရေးရဲ့အစမှာအညီ, များစွာသောအားထုတ်မှုသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကျေနပ်အောင်နှင့်သူ့ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နေကြတယ်, အလွန်ကြီးမားသည်နှင့်။
သို့သော်နေ့စဉ်စတင်ခဲ့သည်မှာအချိန်တစ်ဆက်ဆံရေးအတွက်အဲဒီမှာလာပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏မေတ္တာတော်ကိုတစ်ခါတစ်ရံခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ယခင်ကနေဆဲအနည်းငယ်လျော့နည်းအချိန်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေး, အတွက်အရေးပါတဲ့အချက်ပါသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ အဆိုပါရင်ခုန်စရာအမူအရာမရှိရင်ကြောင့်နေ့စဉ်ပိုပိုပြီးအထက်လက်ရရှိသွားတဲ့နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းဆက်ဆံရေးအတွက်တိုတောင်းသာသဘာဝပါပဲ။
တောင်နေဆဲအတော်လေးလတ်ဆတ်တဲ့ ပူးပေါင်း. ကအချစ်ဇာတ်လမ်းလျင်မြန်စွာပယ်ကျီကြောင်းဖြစ်ပျက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီကာကွယ်တားဆီးဖို့အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဆက်ဆံရေးက၎င်း၏အချစ်ဇာတ်လမ်းရှုံးကြောင်းတားဆီးဖို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ အဆိုပါအချစ်ဇာတ်လမ်းအမြဲတမ်းဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်ဦးလိမ်းကိစ္စကိုဆက်လက်တည်ရှိသင့်ပါတယ်။ သို့သော်ရင်ခုန်စရာအမူအရာများအတွက်လက်တွဲဖော်မတစ်ဦးတည်းသာပေးနိုင်ပါသည်။ အဲဒီအစားကအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဂရုစိုက်ဖို့နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်များ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်အဆိုပါအချစ်ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပျက်မထားဘူး။ ကရင်ခုန်စရာခံစားချက်တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြွလာသောအခါနှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဝယ်လိုအားကောင်းနေသည်။ နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်အခြားမိတ်ဖက်ပျော်ရွှင်အောင်ရှာလျှင်ကဆက်ဆံရေးအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုငျသောရင်ခုန်စရာဘဝ, အောင်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူကျရောက်ပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်များအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်, အအချစ်ဇာတ်လမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တန်းလူတိုင်းတစ်ဦးရင်ခုန်စရာအမူအရာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆရှိပါတယ်, အလွန်အမင်းမတူညီကြစေနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ရင်ခုန်စရာနှင့်ဤအကြောင်းပြချက်အဖြစ်အခြားအရာစုံတွဲများအကောင်းဆုံးတူသောအဘယ်အရာကိုတတျနိုငျသဖက်ကိုစဉ်းစားစေသင့်ပါတယ်ရိပ် မိ. ။ တချို့အချိန်ကြာမြင့်သောဆက်ဆံရေးအတွက်ကိုသင်ယေဘုယျအားဖြင့်မိတ်ဖက်သိရန်အလွန်ကောင်းစွာပြုသူကြိုက်တယ်အဘယျသို့သောအရာတို့ကိုသိတော်မူ၏။
ဤသည်ကိုလည်းမိတ်ဖက်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာရင်ခုန်စရာအမူအရာအဖြစ်ကိုရိပ်မိသောအခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွါးကြောင်းအရာတစ်ခုခုပြင်ဆင်ထားရန်လွယ်ကူစေသည်။ နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုနောက်တဖန်မထရှိသည်ဖို့သူတို့ရဲ့အစွမ်းကုန်လုပ်ပေးသောအခါ, အခွင့်အလမ်းတစ်ခုသာဖက်ဒီရည်မှန်းချက်ကိုလိုက်ရှာလျှင်ထက်ကဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။ ယခုပင်လျှင်သေးငယ်တဲ့အမူအရာနဲ့အလားအလာစတင်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။
ပင်သေးငယ်တဲ့အမူအရာဆက်ဆံရေးတစ်ခုရင်ခုန်စရာလေထုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဥပမာ, အလုပ်အပြီးပန်းပွင့်တစ်ဦးပန်းစည်းကိုဝယ်ဖို့နဲ့မိတ်ဖက်ထံသို့ဆောင်ခဲ့တစ်ဦးကအလွန်ကြီးမားတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့လက်ဆောင်အဖြစ်ပန်းပွင့်ကိုရရှိသည့်အခါလူအတော်များများပျော်ရွှင်ကြသည်။
အဆိုပါမိတ်ဖက်စိတ်တော်သည်အခြားမျှော်လင့်မထားတဲ့လက်ဆောင်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်လက်ဆောင်တွေ၏ပေးကမ်းထိုကဲ့သို့သောခရစ္စမတ်, Valentine Day ကိုသို့မဟုတ်မွေးနေ့အဖြစ်ရက်သာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲလုပ်ကြောင်းတစ်ဦးကလက်ဆောင်တစ်ခုမကြာခဏသောသင်မျှော်မှန်းထားသည်နှင့်ပေါ့ပေါ့ယူခံစားအားလပ်ရက်အမည်ခံအပေါ်တစ်ဦးမိတ်ဖက်အဖြစ်လက်ဆောင်ထက် ပို. ပင်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းပြင်ဆင်ကြရသည်။
ထို့ကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောလက်ဆောင်တွေဟာမိတ်ဖက်ပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ကဆုကြေးဇူးကိုဘယ်လိုကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်စျေးကြီးအရေးကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ်ဖက်များအတွက်ခိုင်မာသောခံစားချက်တွေကိုနေဆဲပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းစေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသည်လက်ဟန်ခြေဟန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လက်ဆောင်တွေကိုအံ့အားသငျ့ဒီ type မဟုတ်ရင်ကအလျင်အမြန်သင်တန်းကိစ္စဖြစ်လာနိုင်ပါသည်, နေ့တိုင်းမဖြစ်စေဘဲသင့်ပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေကြားဆက်ဆံရေးအတွက်အချစ်ဇာတ်လမ်းထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အထောက်အကူဆက်လက်နိုင်အောင်ငယ်လက်ဆောင်၎င်းတို့၏ပိုင်ထိုက်သောစောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာစာ၌ပြောပြီသို့မဟုတ်အကျဉ်းချုပ်ရင်ခုန်စရာစကားများ, ခံစားမိနေကြတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ခံစားမှုသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုပြသနေတဲ့လှပသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အသေးစားအမူအရာနှင့်လက်ဆောင်များအရှင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်အသက်ပြန်ရှင်ဖို့သူတို့ကိုရှိသည်ဖို့ကူညီနိုင်သည်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ထိုအချစ်ဇာတ်လမ်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဒါအရေးကြီးသနည်း
ရင်ခုန်စရာအမူအရာသို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာအပြုအမူသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြပွဲအားမိမိအများကြီးနီးစပ်သူသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှတဆင့်။ မကြာခဏလူတွေကသူတို့ပြီးသားယျတန်ဖိုးထားဖို့မေ့လျော့။ တစ်ဦးကဆကျဆံရေးကောငျးအဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းထားသင့်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ ပူးပေါင်း. ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းမရှိပါ။
နှစ်ဦးစလုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမိတ်ဖက်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာစိတ်ဓါတ်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးစားကြသည်ဆိုပါကဒါကြောင့်အကောင်းတစ်ဦးအရာပါပဲ။ အချစ်ဇာတ်လမ်း Self-ထင်ရှားမဟုတ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တန်းရင်ခုန်စရာအမူအရာကိုလည်းသူတို့ monotonous ဖြစ်လာဒီလမ်းအတွက်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်အနည်းငယ်မတူညီဖြစ်သင့်, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်လိမ္မာပါးနပ်ပါဝင်သည်။ မိတ်ဖက်များ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနေသော်လည်း, အချစ်ဇာတ်လမ်းပါလျှင်, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာဆက်ဆံရေးကနေပျောက်ကွယ်သွား, ဒါကြောင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်အရေးကြီးပါသည်။
တစ်ဦးလက်တွဲအတွက်ရင်ခုန်စရာစိတ်ဓါတ်များကြိမ်ပျောက်သွားသော်လည်း, အဲဒါကိုလုံးဝနှင့်အစဉ်အမြဲပျောက်ကွယ်သွားပြီအရေးမထားဘူး။ ယင်းအစားကပင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုထပ်ကြားဆက်ဆံရေးပြန်လည်ရောက်ရှိနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့သည်ထက်နည်းနည်းအားကောင်းကြောင်းသေချာစေရန်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်မှာ romantic အချိန်လေး
အချို့ကိစ္စများတွင်ကအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုထပ်တက်လာပါစေမယ့်အတန်ငယ်ခက်ခဲတာဝန်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ပြည့်စုံသောမိတ်ဖက်အတွက်ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်အဘို့ကြီးစွာသောအရာကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု, ဖြစ်ရပ်အများစု၌ကျိုးနပ်သည်။ သို့သော်သူကိုအမှန်တကယ်ပိုပြီးရင်ခုန်စရာဖြစ်သနည်း အမြိုးသမီးမြားသို့မဟုတ်လူတို့သညျ?
ဒါဟာလူတစ်ဦးချင်းစီဟူသောဝေါဟာရကိုအချစ်ဇာတ်လမ်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုမြင်သောကြောင့်, အမြိုးသမီးမြားသို့မဟုတ်ယောက်ျား, ပိုပြီးရင်ခုန်စရာရှိမရှိပြောတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးလည်းအချစ်ဇာတ်လမ်း၏အဓိပ္ပာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်အနည်းငယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းဂရုစိုက်ဤသို့တစ်ဦးပျော်ရွှင်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်အားပေးလျှင်တစ်ဦးကဆက်ဆံရေးဟာအကြိုးရှိနိုငျပါသညျ။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများထို့ကြောင့်အညီအမျှရင်ခုန်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤအဘယ်အရာကိုတစ်ဦးရင်ခုန်စရာညဦးယံအချိန်ဖြုန်းဖို့စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်တကယ်ဖြစ်နိုင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရာအရပျရသနည်း
အတော်လေးအလွန်ရင်ခုန်စရာဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်သည့်တစ်ဦးကပူးတွဲလုပ်ငန်း, စားသောက်ဆိုင်မှာညစာဖြစ်ပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်အတွင်းအစာစားခြင်းအားဖြင့်, ထိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးညစာမိမိတို့ကိုပြင်ဆင်မကိုင်ပြောဆိုမှုများအပေါ်အစားအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ရမည်။
ဒဏ်ငွေစားသောက်ဆိုင်မှာတစ်ဦးကညစာကျယ်ပြန့်စုံတွဲတစ်တွဲ၏အပန်းဖြေတဲ့ရင်ခုန်စရာဒီဇိုင်းအဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သာယာသောညနပေိုငျးအတှကျစုံတွဲပြန်ရင်ခုန်စရာခံစားချက်တွေကိုခိုင်မာစေရန်သကဲ့သို့နောက်တဖန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားချဉ်းကပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ မရင့်စားသောက်ဆိုင်မှာညစာဆက်ဆံရေးအတွက်အချစ်ဇာတ်လမ်းမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်အံ့သြဖွယ်များကဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကောင်းစွာသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကရင်ခုန်စရာအံ့အားသင့်စရာအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောကွညျ့ရှုနိုငျသညျ။ ဒါကြောင့်ပင်ရင်ခုန်စရာညနပေိုငျးစီစဉ်ဥပမာဖြစ်နိုင်နှင့်ဤသို့ဖြစ်လျှင်ဤလမ်းတစ်မွေ့လျော်အတွက်မိတ်ဖက်ပြင်ဆင်ထားရန်အရေးယူထဲသို့သွင်းထား။ ဒါ့အပြင်အိမ်တွင်ညနေခင်းတစ်ဦးရင်ခုန်စရာစိတ်ဓါတ်များဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်သုံးနိုင်တယ်။
အနည်းငယ်သောဂီတ, တစ်ဦးအဆင်ပြေဆိုဖာ, တစ်ဦးမေတ္တာဇာတ်လမ်းနှင့်ရင်ခုန်စရာဖယောင်းတိုင်။ တောင်မှထိုအသေးငယ်တဲ့အမှုအရာများ၏အကူအညီဖြင့်, တစ်ဦးရင်ခုန်စရာညဦးယံအချိန်ဖြုန်းဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ, စုံတွဲတစ်တွဲညျ့အဝမှခံစားနိုင်။ ဒါဟာအဖြစ်မကြာမီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများညနေပိုင်းတွင်အဘို့ကိုလက်စသတ်နေကြသည်အဖြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်စွန့်ခွာရန်ပင်မလိုအပ်ပါဘူး။
အဆိုပါအိပ်ရာပေါ်တစ်ဦးကပျူငှါနွေးထွေးသောညနပေိုငျးကောင်းစွာအလွန်ရင်ခုန်စရာဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ သင်တန်း၏, သင်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးအတွက်အချစ်ဇာတ်လမ်း get ကိုကူညီနိုငျသောအခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ တက်ကြွစွာသူတို့ရဲ့အားလပ်အချိန်ဖြုန်းလိုသူကိုစုံတွဲများ, နှစ်ဦးစလုံးအတူတကွမိတ်ဖက်လေ့ကျင့်ခန်းနိုငျသောဝါသနာကိုရှာဖွေဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ကိုလည်းအမြဲတမ်းဆက်ဆံရေးအတွက်နေ့စဉ်အသက်တာနှင့်အတူအချစ်ဇာတ်လမ်းပေါင်းစပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမိတ်ဖက်များ၏ဝါသနာစိတ်ဝင်စားကြောင်းလည်းမရှိပြသနိုင်ဖို့, ဥပမာ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ ခွဲဝေမှုအကျိုးစီးပွားခြင်းအားဖြင့်စုံတွဲများကိုအတူတကွသူတို့ရဲ့အခမဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
ပြီးနောက်အားလုံးရင်ခုန်စရာအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများလည်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်သူတို့၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိသည်သောတစ်ဘုံဝါသနာအဘို့အကြည့်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ကခုန်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေနေချိန်မှာစုံတွဲများဥပမာ, ပြီးတော့ကခုန်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာကျွမ်းကျင်စွာအသစ်သင်ယူခုန်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ကခုန်လူတန်းစားတက်ရောက်ရန်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဘုံဝါသနာဆက်ဆံရေးအတွက်အချစ်ဇာတ်လမ်းမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းကသူ့ကို၌များစွာသောအကျိုးစီးပွားပစ္စုပ္ပန်သည်ကိုသင်တို့သည်မိတ်ဖက်ပြသရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကသာကိုပြန်ဆက်ဆံရေးသို့အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုရောက်စေဖို့တစ်ချိန်ကစီမံခန့်ခွဲ, နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်သူတို့သည်နောက်တဖန်အိပ်ပျော်မသေချာအောင်သင့်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ခုချင်းစီကို pair တစုံတစ်ခုကိုထားပြီးအချစ်ဇာတ်လမ်းဆက်ဆံရေးအတွက်အတန်ငယ်လျှော့ချခဲ့သည်ဖြစ်ပျက်သောအတွက်ကြောင့်ပြန်လည်လက်တွဲသို့အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုပြန်ပို့မည့်အမှုမှာအလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဤအကြောင်းကြောင့်ထိုသို့ရင်ခုန်စရာခံစားချက်နောက်တဖန်အိပ်ပျော်တော်မမူကြောင်းသေချာစေရန်သဘာဝကျပါတယ်။ အဆိုပါအချစ်ဇာတ်လမ်းဆိုဆက်ဆံရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့တိုင်း ပူးပေါင်း. ဖြစ်သင့်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
တောင်မှသေးငယ်တဲ့ရင်ခုန်စရာအမူအရာဟာအချစ်ဇာတ်လမ်းဆက်ဆံရေးအတွက်လစျြလြူရှုမပေးကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ အချို့ကောင်းတဲ့ချီးမွမ်းသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားလုံးများကိုစီရင်မခက်ခဲများနှင့်မိတ်ဖက်ဆက်ဆက်ဒီတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။ သင်တန်း၏, အသေးစိတ်ပြောဆိုမှုများတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးလှသည်ကြောင့်အိမ်မှာတစ်ဦးရင်ခုန်စရာစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပျူငှါနွေးထွေးသောညနပေိုငျးမှတစ်ဦးကပူးတွဲအလည်အပတ်ခရီး, သင့်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူအချို့သောအချိန်ဖြုန်းဖို့နှင့်ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဒါဟာအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ဦးပူးပေါင်းအိပ်ပျော်ကျရောက်ကြောင်းနည်းနည်းအားထုတ်မှုနှင့်အတူတားဆီးဖို့ပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရိုမန်းတစ် Weekend | မိတ်ဖက်အချစ်ဇာတ်လမ်း
ဖိနပ်ထဲမှာ Puss - ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်စာသားညီအစ်ကိုများ Grimm
ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်စာသားကို Hans Christian Andersen က - အဆိုပါ ...